२०७४ असार ८ बिहीबार १८:३०:०० प्रकाशित
काठमाडौँ- स्वास्थ्य मन्त्रालयको १२‍औँ तहकी प्रमुख विशेषज्ञ डा. किरण रेग्मी स्वास्थ्य सचिवमा नियुक्त भएकी छिन्। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वास्थ्य सचिवमा नियुक्ति पाएकी डा. रेग्मी राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेकी छोरी हुन्। मन्त्रिपरिषदको निर्णय लगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले उनलाई बिहीबार दिउँसै सचिवमा बढुवाको पत्र दियो।
पत्र हात पर्ने बित्तिकै डा. रेग्मीले खुसीको समाचार बुबाआमालाई दिन चाहिन्। फोनबाट खुसीको सन्देश सुनाउनु भन्दा पनि उनी बुबाआमाको अनुहारमा प्रत्यक्ष खुसी हेर्न चाहन्थिन्। त्यसैले उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सचिवमा बुढाव भएको पत्र लिएर कुपरधारास्थित माइती घरमा बुबाआमालाई भेट्न पुगिन्।
बुबाआमाको आँखामा आँशु, मुहारमा खुसी
स्वास्थ्य मन्त्रालयको सभाकक्षमा उनलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रममा डा. रेग्मीले बुबालाई भेट्न गएको प्रशंग कोट्याउँदै भनिन्, ‘बुबाआमाकहाँ पुग्ने बित्तिकै मैले बढुवाको पत्र देखाएँ। निरन्तर मिहिनेतको फल प्राप्त भयो, मलाई सरकारले सचिवमा बढुवा गर्यो भनेँ। मेरो कुरा सुनेपछि बुबाले पत्र हेर्दै आँशु झार्नु भयो। बुबाले खुसीका आँशु रोक्नै सक्नु भएन। आँखामा आँशु अनि अनुहारमा मुस्कान। आमाको आँखाबाट पनि आँशु झरेको थियो अनि ओठमा मुस्कान थियो।’ डा. रेग्मीले बुबाआमाबाट आशीर्वाद लिएर मन्त्रालयमा आएको जानकारी दिइन्। उनले आफ्नो हरेक दुःख-सुखमा सधैँ साथ दिने भन्दै श्रीमानलाई पनि सम्झिएकी थिइन्।
मन्त्रालयमा उनलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम ४ बजेलाई राखिएको थियो। उनी पौने ४ बजे मन्त्रालय छिरेकी थिइन्। केहीबेर मन्त्रालयका सहकर्मी र अन्य कर्मचारीबाट अनौपचारिक बधाई थापेपछि उनी कार्यक्रम हलमा पुगेकी थिइन्। कार्यक्रम हलमा पुगेपछि उनले सरकारलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो जागिरे यात्राबारे अनुभव साटिन्।
सरकारी सेवामा छिर्दा २५ दिनको सुत्केरी
डा. रेग्मीले नेपाल सरकारको जागिर २०४४ सालबाट सुरु गरेकी थिइन्। उनको पहिलो पोस्टिङ बाग्लुङमा भएको थियो। त्यतिबेला बाग्लुङ एयरपोर्टमा प्लेन आउजाउँ गर्थे। उनी पनि जागिर खान प्लेन चढेरै गइन्। तर, उनले प्लेनबाट झरेपछि कार्यालय भएको स्थानमा जान चार घन्टा हिँड्नुपर्यो।
‘भर्खरै सुत्केरी भएर ज्यान तंग्रिरहेको थियो,’ उनले विगत सम्झँदै भनिन्, ‘काठमाडौंमै जन्मे हुर्केकी मलाई पहाडको बाटो हिँड्न अप्ठेरो पर्यो।। काठमाडौंबाट एकै पटक त्यति टाढा त्यो पनि २५ दिनको बच्चालाई काठमाडौंमै छाडेर जानुपर्दा केही नरमाइलो पनि लागेको थियो ।’
बाग्लुङमा केही समय सेवा गरेपछि उनको धनगढीमा सरुवा भयो। धनगढीपछि चितवन हुँदै उनको धेरैजसो समय काठमाडौं बाहिर नै सरुवा भयो। ‘सरकारले जहाँ खटाउँथ्यो म त्यहीँ गएर सेवा गर्थें,’ डा. रेग्मीले भनिन्, ‘त्यही दुःखको प्रतिफल हो यो। विगतमा मैले गरेको सेवा देखेर सरकारले आज मलाई सचिव पदमा बढुवा गर्दै पुरस्कृत गरेको ठानेकी छु।’
सचिव होइन, डा. किरण नै भन्नुहोस्
सचिवको हैसियतमा कार्यक्रममा भाषण गरिरँदा डा. रेग्मीले आफूलाई उही पुरानो डा. किरण नै भनेर सम्बोधन गर्न सबै कर्मचारीसँग आग्रह गरिन्। ‘म सचिवमा बढुवा भए पनि तपाईंहरुको उही पुरानो डा. किरण नै हुँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण मलाई तपाईंहरुले सचिवज्यू भन्दै संबोधन गर्नुपर्दैन विगतझैँ डा. किरण भनेर माया गरिदिनुहोला, सहयोग गर्नु होला।’
कार्यक्रममा नवनियुक्त सचिव डा. रेग्मीले सबै कर्मचारीलाई नियममा रहेर काम गर्न पनि निर्देशन दिइन्। उनले जिल्लाको तल्लो तहदेखि सचिवसम्म काम गरेको अनुभवका आधारमा समस्याहरुसँग परिचित भएको भन्दै ती समस्या समाधान गर्न लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। उनले आफू माताहतका सबै कर्मचारीलाई हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न पनि आग्रह गरिन्।